धन लाभ हुनुभन्दा पहिले देखिन्छन् सपनामा यस्ता संकेतहरु, तपाईले पनि देख्नुभयो की ? – Sandesh Press
September 1, 2021 556
काठमाडौँ । हिन्दू धर्मशास्त्रमा शुभ र अशुभ विषय बारे उल्लेख गरिएको पाउन सकिन्छ । अहिलेको वैज्ञानिक युगमा यस्ता कुराहरुमा विश्वास नगर्नेको संख्या उल्लेख्य छ तर केहीले भने यस्ता कुरुालाई सही मान्छ जिवनमा ।
केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् ।त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ । केही यस्ता संकेत छन्।
जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिने मान्यता रहेको छ। विहीबारको दिन कुनै कुमारी कन्यालाई पहेँलो बस्त्रमा देख्नु भयो भने पनि शुभ संकेत मान्नुहोस् तपाईलाई धन लाभ हुन सक्छ। यदी तपाईंको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार चिलाई रह्यो भने सम्झनुहोस् तपाईंलाई धन प्राप्त हुन सक्छ।
यदी तपाई धन सम्बन्धी कामको लागि बाहिर जान कपडा लगाउँदै गरेको अवस्थामा तपाईंको हातबाट पैसा खस्यो भने तपाईंलाई धन प्राप्ति हुन सक्छ। विहान सुतेर उठेको बेलामा यदी कोही मगन्ते या जोगी तपाईंको ढोकामा आयो भने त्यसलाई खाली हात नफर्काउनुहोस् । किनकी तपाईलाई नमागीकनै धन प्राप्ती हुन सक्छ।
Prevयी बार गर्नुहोस् नयाँ कामको सुरुवातः कमाउनु हुनेछ सोचेभन्दा बढी धन
Nextतुरुन्त घरबाट हटाउनुहोस् यी ६ चिज : अन्यथा कहिल्यै हुँदैन प्रगति !
फेरी बाहिरियो पल र समिक्षाको अर्को भिडियो ? पल शाह र समीक्षा अधिकारीको वि,वादमा जयकिशन र पुण्यको भ,नाभन (भिडियो सहित)
काे-राेनाकाे तेस्रो लहर आएमा बालबालिकालाई बढी जोखिम, अहिलेदेखि नै यस्ता तयारीमा जुटेनाैँ भने सम्हाल्न नसकिने !